Ciidammo tababar ku soo qaatay dalka Uganda oo dib dalka ugu soo laabtay
Ciidammo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo tababar ku soo dhameystay wadanka Uganda ayaa maanta lagu soo dhaweyay Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaaladda Muqdisho.
Ciidamadan maanta dib ugu soo laabtay dalka oo ay tiradoodu ka badneyd 500 ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay wasiirka difaaca dalka, ku xigeenadiisa, Abaanduulaha ciidanka XDS, saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo kuwa ka socday AMISOM.
Wasiirka difaaca dalka Mudane C/xakiim Maxamuud Xaaji Fiqi oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in ciidamadan ay yihiin saraakiil, saraakiil xigeeno iyo kuwo soo bartay caafimaad isagoona ugu hambalyeyay sida wanaagsan oo ay u soo qaateen tababarka.
Fiqi ayaa intaasi ku daray in imaashaha ciidamadan ay wax weyn ka badalayaan xaaladaha amaanka ee dalka loogana baahan yahay in ay gutaan waajibkooda isagoona, ciidamada ku amaanay sida wanaagsan oo ay u qaateen tababarka.
“Dowladda Soomaaliya waxa ay ahmiyad gaar ah siineysaa ciidamada qalabka sida taas oo ay cadey u tahay sida dhamaan maas’uuliyiinta wasaaradda difaaca ay idinku sugayeen garoonka si ay dalkiina idiinku soo dhaweyaan” ayuu yiri wasiirka.
Sidoo kale wasiirka gaashaandhiga ayaa carabka ku dhuftay in ciidammada maanta dalka ku soo laabtay la siin doono tababar gaaban kaas oo ku aadan wadaniyada iyo wadan jeceelka si ay shacabkooda ugu adeegaan.
Ciidamadan maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa ah dufcadii ugu horeysay oo dalka yimaado tan iyo markii la dhisay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.